Cunnada ma iska cuntaa, mise kuwan ayaad ka xulataa? (Aqri) - Caasimada Online
Home Caafimaad Cunnada ma iska cuntaa, mise kuwan ayaad ka xulataa? (Aqri)
Cunnada ma iska cuntaa, mise kuwan ayaad ka xulataa? (Aqri)
Qofka kasto oo banii’aadam ah waxa uu baahan yahay cunto si uu guto howl maalmeedkiisa, hadaba, waxaadse moodaa bulshada Soomaliyed inaysan wax badan kala socon habka ugu wanaagsan ee uu ku heli karo cunto isku dheeli tiran.
Cuntada waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo jirka banii’aadamka wax tar u leh. Qayb kasto oo cuntadaas ka mid ah waxay qabataa shaqo gaar ah oo haddii uu jirka waayo uu kala kulmi karo dhibaato, waxaana loo kala qaybiyaa cuntada sedex qaybood, marka laga hadlaayo shaqada ay jirka u qabato waxayna kala yihiin:-
• Cunto laga helo tamar (energy) waxaana ka mid ah bariiska, baastada, canjeerada, iyo qaybo kale oo badan.
• Cunto jirka dhisto (proteins) waxa ka mid rashinka laga helo hilibka, kalluunka, digaaga, ukunta, caanaha, digirta cas.
• Cunto jirka siisa difaac (protective foods) waxaana ka mid ah vitamiinada iyo macdanaha, waxaana inta badan laga helaa qudaarata iyo geed miroodka (fruits and vegetable.
Haddaba qofka banii’aadamka waxaa laga doonayaa inuu maalin kasto cuno ugu yaraan seddex waqti oo ay ku jiraan seddexda qaybood oo aan kor ku soo sheegnay, hdadii uu cunana waxaa la dhihi karaa qofkaas waxa uu cunay cunto isku dheeli tiran, tusaale ahaan.
• QURAAC, kasoo qaad inaad quraac ahaan u cuntay Rooti, Ukun, shah, iyo cabitaan laga sameeyay Orange. Rootiga iyo shaaha waxay noqon karaan kuwa laga helo tamarta oo ah waxa uu qofka aadanaha ku dhaqdhaqaaqayo ama ku shaqeenayo, Ukunta waxay ugu jirtaa cuntada jirka dhisto (body Building foods) cabitaanka laga sameeyay Orange- da waxay laga helayaa vitamin iyo macdano. Hadaba qofkaas quraacda uu cuanay waxaan dhihi karnaa waa quraac isku dheeli tiran waayo sedexda qaybood oo ay cuntada ka kooban tahay ayaa ku jiro.
• QADO, kasoo qaad inaad cuntay, bariis, xoogaa hilib ah, iyo qudaarta cagaaran sida salarka oo kale, iyo cabitaan laga sameeyay canbe ama qarre, bariiska waxaad ka heleesaa tamar, hilibka sidoo kale waxaad ka heleesaa proteins, qudaarta cagaaran, cabitaanka juice-ka ka sameesan waxaa laga helayaa kuwa loo yaqaano protective food oo ah kuwa jirka ka caawiyo inuu difaac sameesto, haddaba qadadaas waxaan ka dareemeenaa inay tahay mid isku dheeli tiran.
• CASHO, cashada inta badan lama cuno cunt culus, waaayo waxay keeni kartaa caafimaad darro hadaad isticmaasho cunto culus iyo waqti aan munaasib aheen, waqti aan munaasib aheen waxaan loola jeedaa inaad casheeso wixii ka danbeeyo labo saac habeenimo, cashada ugu fiican waa wixii ka horeeyo labo saac, INSHA ALLAH. Qormooyinkeena soo socdo ayaan kaga hadli doonaa dhibaatooyinka ay leeyihiin cashada la cuno xilliyada danbe habeenikii.
Hadaba aqristow waxaan filayaa inaad hada wixii ka danbeeyo aad la soocan doontid cuntadaada, waayo cuntada wanaagsan waxay aas aas u tahay caafimaadka wanaagsan, hadii uu caafimaadkaada wanaagsan yahay-ne howl maalmeedkaada si fiican ayaad u gudan kartaa.
W/D: Macalin Qadar Mohamud Diriye
Madaxa Caafimaadka Caasimada Online